Lalao Multiplayer ao amin'ny RTS mahafinaritra antsoina hoe Crush Your Enemies! | Androidsis
Tsy fantatro hoe firy ny lalao azoko andramana mandritra ny herinandro, saingy misy maro amin'izy ireo indraindray mahita zavatra tsy ampoizina kely ianao. Ireo tsy ampoizina kely ireo dia ireo izay tsy manana fampidinana betsaka, tsy manana studio lalao video ekena ary mety tsy ho voamariky ny maro. Teraka ihany koa ny Minecraft, ary efa fantatrao ny tantarany mba ho lasa iray amin'ireo lalao video tsara indrindra teo amin'ny tantara. Amin'izany fikarohana tsy miato amin'ny lalao vaovao izany, toy ny hoe mpitrandraka volamena ny tenany, dia nahagaga tampoka volamena ny fahita ankehitriny.
Ilaina ny mandanja an'io takelaka volamena io mba hahafantarana hoe firy grama no ananany, saingy azo antoka fa milanja azy io ary io dia miendrika a Lalao video RTS antsoina hoe Crush Your Enemies! Lalao video tetika ara-potoana tena mahazatra izay misy antsipiriany sasany mampiseho tsara ny kalitaony. Lalao video tsy manam-paharoa izay maneho azy io amin'ny heviny hoe afaka milalao amin'ny alàlan'ny kinova Android na PC. Ilay anarana dia manondro ny feony mampihomehy hanome anao fihomehezana ihany koa rehefa milalao azy ianao ary misy antsipiriany mahaliana sy mahatsikaiky toa ireo ady izay nanesorana ireo mpiady noho ny fahombiazan'ny tolona tena izy. !
1 Fahagagana kely amin'ny maha RTS azy
2 Miaraka amin'ny multiplayer tsara
Fahagagana kely amin'ny maha RTS azy
Mihemotra noho ny lalao hafa manandrana asehoy ny tetika tsara indrindra, Ravao ny fahavalonao! mitondra amin'ny mpilalao ny fototr'ity karazana lalao video ity izay hetsika ratsy iray afaka mamela ny fahavalo handrava anao tsy misy famelan-keloka hamarana ny lalao eo noho eo izy io. Hanana ny fototry ny asanao ianao, ny fahaizana manitatra io fotony io, mikaroka ireo haitao vaovao ary, mazava ho azy, ny fahaizana mamorona tafika anao miaraka amina toby mpiaro.
Tokony ho fantatrao ihany koa ny fomba fitantanana ireo loharano anananao amin'ny fanananao miaraka amin'izay mandidia ireo tafika ireo manandrana manjaka na mandresy ny mifanohitra amin'izay. Ny foko tsirairay dia hanana loko mitovy amin'ny sarintany lalao ary isaky ny mandao ny fonenanao ianao dia tsy maintsy mandresy ny kianja tsirairay mandra-pahatonganao any amin'ny tafika fahavalo na ny toby. Arakaraka ny habetsaky ny miaramila anananao ao amin'io kianja io no hainganao ny fandresena azy, noho izany ny hetsika dia tokony hoeritreretina tsara alohan'ny hamelezana azy etsy ankilany.
Miaraka amin'ny multiplayer tsara
Eo am-pototra dia azonao atao ny manatanjaka ny tafikao amin'ny fampidirana vaovao satria manana miaramila ao ianao. Ianao dia afaka zarao araka izay itiavanao azy ireo afaka manafika base na mametraka fiarovana matanjaka an'io fahavalo manafika anao avy any aoriana io. Ny sarintany sy ny haavo tsirairay avy dia samy manana ny safidiny stratejika ary amin'ny fampielezan-kevitr'olon-tokana dia hanana atiny an-jotra hankafizanao ianao.
Ny iray amin'ireo hatsaram-panahiny lehibe indrindra dia ny multiplayer manerana sehatra maro, mba hahafahanao milalao miaraka amin'ny namanao na amin'ny PC izy ireo na amin'ny finday. Azonao atao ny mianatra mifehy ireo karazana singa samihafa manafika ny namanao amin'ny alàlan'ireto lalao multiplayer ireto. Tsy misy ihany koa ny tsy fahampian'ny ady amin'ny boss final izay hanasarotra azy.
Ary raha fintinina, lalao video misy a mikasika ny vazivazy an'ny olon-dehibe Izany dia mety hiteraka herisetra, labiera, ary tantara hafa hotantaraina amin'ny ady. Manana izany maimaim-poana ianao avy amin'ny Play Store miaraka amina micro-fandoavam-bola tokana hanalana ny atiny rehetra amin'ity lalao video mahafinaritra ity.
Misongadina amin'ireo singa voafantina tsara mandrafitra ny lalao video mihitsy izy. Ireo sary fomba Retro pixelated Izy ireo dia mahavita mampiditra anao tanteraka amin'ilay atmosfera baribariana, ireo sary mihetsika tsotra izay mahomby amin'ny fampitsiky ny mpilalao sy ny feo sy ny feo mifanome tanana mba hahatonga anay hanana fotoana mahafinaritra be. Lalao iray ahafahanao milaza fa fantatry ny mpamorona ny zavatra ataony.
Manorotoro ny fahavalonao!
Kalitao tsara hita
Afaka milalao azy amin'ny sehatra samihafa
Developer: Fialamboly mpiandry ondry tsara
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Manorotoro ny fahavalonao! RTS vaovao misy kalitao be izy ary tena barbariana
Paikady ara-potoana miaraka amin'ny Battleplans, lalao vaovao miaraka amina fomba fijery mahafinaritra